Imbali ye-gastronomy yase-India, izithethe zayo kunye nokutya okuqhelekileyo | Ukuhamba kwe-Absolut
ULuis Martinez | | Indiya
Imbali ye-gastronomy ye Indiya iqala kwinkungu yexesha. Nangona kunjalo, sinokuseka umzuzu odumileyo obeka imvelaphi yawo ngephanyazo Izilumko zeHimalaya zafumanisa iziqholo.
Le ntsomi ayisiyonto ilula, kuba ezi condiment zihlala zine- ukubaluleka kwenkunzi Kwindawo yokutya yaseIndiya. Ngapha koko, sesinye sezizathu zokuba yaziwe kwihlabathi liphela kwaye kutheni isaziwa njalo enye yezona ndawo zixabisekileyo kakhulu kwiiplanethi. Ukuba uthanda ukupheka kwaye ufuna ukwazi ngakumbi ngembali ye-Indian gastronomy, siyakumema ukuba ufunde inqaku lethu.
1 Imbali ye-Indian gastronomy: imvelaphi yesiko
1.1 Imvelaphi yesiko
1.2 Impembelelo yamanye amazwe
1.3 Izinongo, kubalulekile kuyo yonke imbali ye-Indian gastronomy
2 Inkqubo yokutya eIndiya
3 Ezinye izitya eziqhelekileyo zaseIndiya
3.1 UDal, iilentile zohlobo lwaseIndiya
3.2 IChapati, isonka esinexabiso eliphakathi eIndiya
3.3 I-Pulau irayisi, impembelelo yaseMongolia kwimbali ye-Indian gastronomy
3.4 Inkukhu yaseTandoori, iklasikhi
3.5 Samosa, ukuqala okumnandi
3.6 URaita, isisu esihlaziyayo
3.7 I-Lassi, sela ngokugqwesa
Imbali ye-Indian gastronomy: imvelaphi yesiko
Ukutya kwaseIndiya, njengakuyo yonke enye indawo, sisiphumo sesidingo sokulungiselela izitya ezimnandi kwizidlo. Kodwa ukongeza, kusenokwenzeka ukuba yavela nge injongo yesiko, Into eyahlula kwezinye iigastronomies.
Ewe kunjalo, ukutya kwaseHindu kwasekuqaleni kwakune uphawu olungcwele. Ezitempileni izitya zazilungiselelwe ezazinikelwa koothixo njenge unikelo. Kodwa, kwangaxeshanye, babekhonza njengokutya kwabahambi ngezonqulo. Yiyo loo nto uninzi lwezi zibangelwa Ukuphilisa iipropathi.
Ngapha koko, lo mkhuba usaqhubeka. Ukutya okunikelwa kwizithixo kuyabizwa ibhogi kwaye yenziwa kuphela nge iimveliso ezitsalwe ngqo kwindalo. Awuyi kufumana kuyo kusetyenzwe. Ikwanokufudunyezwa kuphela ngamajelo osasazo ngokwendalo anje ngeziqu zemithi okanye amaqokobhe ecoconut, akukho gesi okanye umbane.
IGaram masala yeziqholo
AmaIndiya ahlonipha ukubaluleka kwesi senzo kangangokuba ukupheka etempileni kuyabonelela iwonga elikhulu ekuhlaleni. Kwaye ngokufanayo, intlawulo yile ilifa kwiintsapho. Nabani na olungisa izitya kufuneka aqale ahlambe kwaye acoce ikhitshi.
Kwelinye icala, isithixo ngasinye samaHindu sinesitya esidibeneyo. Umzekelo, Ganesha, eyaziwa ngentloko yendlovu, inokwayo mthe ndeleko. Ngeli xesha, iitapile zilungiswa nge-sosi yeyogathi kunye neziqholo ezinikwa amadoda kwaye, ngokuchanekileyo, kwiindlovu.
Impembelelo yamanye amazwe
Xa i-India yenziwa ikoloniyoni, i-gastronomy yayo yafumana iimpembelelo ezahlukeneyo zangaphandle. Kodwa yaqhubeka ingcwele kumaHindu. Ungalufumana uluvo loku ukuba sikuxelela ukuba ukutya kokuqala kosana kugqunywe nge umsitho omkhulu, ngokungathi kukubhaptizwa kwakho okanye ngumtshato.
Phakathi kweefeshini ezichaphazele i-gastronomy yase-India ukutyhubela iinkulungwane zezi portugue, la amaSilamsi, la i-persian kunye IsiNgesi ikakhulu. Ngenxa yoko, i-gastronomy yaseIndiya ibonakaliswa yiyo Iindidi ezahlukeneyo zeencasa, imibala kunye nemibala, kunye nexabiso elikhulu elibekwe kuyo iziqholo, imifuno kunye nerayisi.
Izinongo, kubalulekile kuyo yonke imbali ye-Indian gastronomy
Sele sichazile kulo lonke eli nqaku ukubaluleka kweziqholo kukutya kwaseIndiya. Kodwa kukuba benza olona phawu lubalaseleyo. Phakathi kwezona zisetyenziswa kakhulu yi-turmeric, ikumin, ijinja, isilili, i-rai okanye i-mustard emnyama kunye ne-coriander. Kodwa kunye ne-turmeric, fenugreek, coriander, isafron kunye hing okanye isityalo se asafoetida.
AmaIndiya anika ixabiso kakhulu kwiziqholo kangangokuba ade azidibanise. Idume kakhulu yile ibizwa ngokuba garam masala, eyenziwa ziihlanu. Ezi ziqhelekileyo isinamon, ii-clove, i-nutmeg, i-pepper emnyama kunye ne-cardamom.
Kodwa esona spice sithandwa ngu umgubo wekhari, Yenziwe ngokugaya isityalo securry ngokwawo kunye neendidi zazo. Zenziwe nazo curries isosi. Eyona nto ibalaseleyo kwezi yimarinade eyaziwa ngokuba indalo kwaye oko, ngokumangalisayo, kuvela kwimvelaphi yasePortugal. Zidume ngokulinganayo isaga kunye madras.
Inkqubo yokutya eIndiya
Besikuxelela ukuba amaHindu abeka ixabiso elikhulu ekutyeni. Kungenxa yoko le nto kungafanele kumangalise ukuba bamkhaphe kuyo yonke into isithethe. Izitya zinikwa kwisikhongozeli esinye kwaye imixholo yayo ithathwa ngesandla sasekunene, ngakumbi ngeminwe emine, kuba zombini isalathiso sesandla kunye neminwe yasekhohlo zithathwa njengezenzelwe izinto ezingcolileyo.
Ngokukwanjalo, ukuba umntu ukunika ukutya ngesandla eIndiya, sukukhathazeka. Yi ukubonisa intlonipho nokubuk 'iindwendwe. Kwindlela efanayo, ukuba uyala ukutya abakunika kona, uyakubonisa krwada kakhulu kwaye baya kukhathazeka.
Ezinye izitya eziqhelekileyo zaseIndiya
Imbali ye-gastronomy yase-India ishiye izitya ezininzi eziqhelekileyo ezaziwa kwihlabathi liphela. Akunakwenzeka ukuba sichaze zonke kuwe. Kuba indawo nganye yelizwe elikhulu inelayo. Siza kuhlala, ke ngoko, kukuxelela ngezinye zezona zininzi ithandwa kwaye emnandi.
Dal, Iilentile zohlobo lwaseIndiya
Iidali zikhona isityu seentlumayo Ziyahluka ngokweendawo zaseIndiya. Nangona kunjalo, ngokubanzi zonke zinayo le mbotyi, ngakumbi ikwimo ebomvu, ijinja, iturmeric kunye negalikhi. Banikwa irayisi nesonka.
IChapati, isonka esincinci seNdiya
Ngokuchanekileyo, isonka esiqhelekileyo saseNdiya chapati, Yenziwe ngohlobo lomgubo wengqolowa opheleleyo kwaye inobume obufanayo nobethu iikeyiki. Kuxhomekeka kwindlela ekulungiselelwe ngayo, ihamba ngamagama ahlukeneyo. Yiyo loo nto ulunge Yenziwe ehovini, ngokuthe glu kwiindonga ze-oveni. Kwelinye icala i roast Yenziwe kwi-grill kunye ne ipuri eqhotsiweyo. Kwelinye icala, i iparatha Isonka sifakwe imifuno.
Ilayisi ipulau, Impembelelo yaseMongolia kwimbali ye-Indian gastronomy
Ilayisi yenziwa eIndiya ngeendlela eziliwaka ezahlukeneyo. Kodwa eyona mveli yile ibizwa ngokuba yirayisi ipulau o ipilau, zenziwe ngemifuno, ngokuqinisekileyo iziqholo kunye Isidlo saseMongolia. Le mpembelelo inye ithetha ukuba iziqhamo nazo ziyongezwa kuyo.
Pollo Tandoori, iklasikhi
Esi sidlo asiyoyokwesiko eIndiya kuphela, kodwa sikwindawo yokutyela yaseIndiya eNtshona. Inokwenziwa ngeendlela ezahlukeneyo, kodwa, ikwinguqulelo yayo esisiseko, Ikuku yenkuku eselwandle kunye nenongo eyenziwe eontini. Ngapha koko, igama layo livela kwinto yokuba iphekwe ngaphakathi iioveni Tandoori, zenziwe ngodongwe.
Samosa, ukuqala okumnandi
Kusenokwenzeka ukuba sesona sitya saziwayo saseIndiya kwihlabathi liphela, esifana noko kwenzekayo ngemiqolo yasentwasahlobo ukutya kwaseChinese. Isamosa yiyo Ukulahla okulahliweyo iitapile, ertyisi, itswele kunye nobulawu. Nangona kunjalo, unokuyifumana neminye imifuno okanye nenkukhu.
URaita, isisu esihlaziyayo
Ngokusisiseko, yi iyogathi kudityaniswe nemifuno, ngakumbi ikhukhamba, kunye namayeza anencasa. Nangona kunjalo, kukho amawaka aliqela okwahlulahlula kwi-Hindu gastronomy.
I-Lassi, isiselo esingabalulekanga
AmaHindu asela kakhulu iti yobisi. Kodwa eyona nto ixhaphakileyo iseyi lasi, zenziwe ngeyogathi engamanzi apho iziqhamo ezinjengebhanana, imango okanye ipapaya zongezwa khona.
Ukuqukumbela, sikubonise indawo elungileyo yefayile ye- Imbali ye-Indian gastronomy, kunye neyabo amasiko ngexesha lesidlo sasemini kwaye ezinye zazo izitya eziqhelekileyo. Ngoku kufuneka uthathe isigqibo sokuzama. Awuyi kuzisola njengoko zimnandi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Imbali yeGastronomy yaseIndiya
Imvelaphi yeThala leencwadi